Ny kinova vaovao an'ny Java SE 14 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Rehefa afaka enim-bolana ny fampandrosoana, Oracle dia nanambara ny famoahana ny kinova Java Java 14 vaovao. Ity sehatra ity dia ampiasaina ho fampiharana loharanom-baovao misokatra OpenJDK. Java SE 14 dia mitazona ny fifanarahana mihemotra miaraka amin'ny sehatra Java; Ny tetikasa Java voasoratra teo aloha dia hiasa tsy miova rehefa atomboka amin'ilay kinova vaovao.
Compilations Java SE 14 vonona hametraka (JDK, JRE ary Server JRE) dia vonona Linux (x86_64), Windows ary macOS. Ny fampiharana referansa Java 14 novolavolain'ny tetikasa OpenJDK dia misokatra tanteraka amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GPLv2 miaraka amin'ireo fanavakavahana GNU ClassPath izay mamela ny fampifandraisana haingana amin'ireo vokatra ara-barotra.
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Java SE 14
Ity kinova vaovao an'ny Java SE 14 dia sokajiana ho vanim-potoana fanohanana mahazatra Ho an'ireo fanavaozam-baovao izay havoaka alohan'ny andiany manaraka satria ny sampana LTS miorina "Java SE 11" dia hanana fanavaozana hatramin'ny 2026, raha ny sampana Java 8 LTS teo aloha kosa hotohanana hatramin'ny Desambra 2020.
Anisan'ireo zava-baovao amin'ity kinova ity ny fanohanana fanandramana an'ny ohatra, firaketana an-tsoratra y mpivady fanohanana andranananjary fanakan-tsoratra no nitarina.
ohatra: Izy io dia ampiasaina amin'ny fampifanarahana ny lamina ao amin'ny mpandraharaha izay mamela hamantatra avy hatrany ny fiovana eo an-toerana hiditra amin'ny sanda voamarina.
firaketana: manome fomba voafintina hamaritana kilasy, hisorohana ny famaritana mazava ny fomba ambaratonga ambany isan-karazany, toy ny mitovy (), hashCode () y toString (), amin'ny tranga izay itehirizana ny angona fotsiny eny an-tsaha.
Fanitarana ao anaty bara-tsoratra: manome endrika litera literaly vaovao ahafahanao mampiditra angon-drakitra an-dahatsoratra marobe ao amin'ny kaody loharanom-pahalalanao nefa tsy mampiasa tarehintsoratra fitsoahana ary hitahiry ny famolavolana lahatsoratra tany am-boalohany. Ny famolavolana blaogy dia vita amin'ny fitanisaina indroa miisa telo.
Ao amin'ny Java 14, ny sakana amin'ny lahatsoratra dia manohana ny filaharan'ny fitsoahana "\_ s" hamaritana habaka tokana sy "\_" hampifandraisina amin'ny tsipika manaraka.
Afaka mahita izany koa isika fampiharana kinanjo ny jpackage utility no nampiharina, de mamela anao hamorona fonosana ho an'ny rindranasa Java irery. Miorina amin'ny JavaFX javapackager ny fampiasana ary ahafahanao mamorona fonosana amin'ny endrika teratany ho an'ny sehatra maro samihafa (msi sy exe ho an'ny Windows, pkg ary dmg ho an'ny macOS, deb ary rpm ho an'ny Linux).
Etsy ankilany dia voalaza izanye misy mekanisma fizarana fahatsiarovana vaovao nampiana ho an'ny mpanangona fako G1, amin'ny fiheverana ireo toetra manokana ananan'ny fiasana amin'ny rafitra lehibe mampiasa ny maritrano NUMA. Ny mpanome fahatsiarovana vaovao dia azo ampiasaina amin'ny faneva "+ XX: + UseNUMA" ary afaka mampitombo be ny fahombiazan'ny rafitra NUMA.
ny topi-maso ny API fidirana fitadidiana ivelany, que mamela ny rindrambaiko Java hiditra amin'ny fomba azo antoka sy mahomby ireo faritra fahatsiarovana any ivelany avy amin'ny heap Java amin'ny alàlan'ny fanodikodinana abstraction vaovao an'ny MemorySegment, MemoryAddress, ary MemoryLayout.
Seranan-tsambo ho an'ny Solaris OS sy ny processeur SPARC nesorina amin'ny fikasana ny hanala ireo amin'ny ho avy. Ny famindrana ireo seranana ireo ho any amin'ny efa lany andro dia hamela ny fiarahamonina hanafaingana ny fampivoarana ireo endri-javatra OpenJDK vaovao nefa tsy mandany fotoana mitazona fiasa manokana ho an'ny Solaris sy SPARC.
koa Nesorina ny mpanangona fako CMS (Mark Sweep miaraka), izay efa lany andro roa taona lasa izay ary tsy niaraka. Ankoatr'izay, nambara fa efa lany andro ny fampiasana fitambarana algorithma fanangonana fako sy ParallelScavenge SerialOld.
Amin'ireo fanovana hafa voalaza ao amin'ny doka:
Nesorina ireo fitaovana sy API amin'ny famoretana ireo rakitra JAR izay mampiasa ny algorithm Pack200.
Nanisy API hanarahana ny hetsika JFR amin'ny sidina (JDK Flight Recorder), ohatra handaminana fanaraha-maso mitohy.
Ny modely jdk.nio.mapmode dia nampiana, izay manolotra modely vaovao (READ_ONLY_SYNC, WRITE_ONLY_SYNC) hamoronana buffer byte (MappedByteBuffer) izay mifandraika amin'ny fahatsiarovana tsy miovaova (NVM).
Si te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny fanambarana an'ity kinova vaovao ity Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Navoaka sahady ny kinova vaovao an'ny Java SE 14 ary ireto ny vaovaony
debian.social: tranonkala hanamorana ny fifandraisana sy ny atiny eo amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa